Musiyano uripo pakati pehupenyu hunobudirira, musika unobudirira, uye vanobudirira le-vel - Best Vabudirire Ndinoda Dried Food
Leave a Comment	/ vanowanda -oma chikafu akaoma / By Admin
Tisati taenzanisa makambani matatu aya ane mazita akafanana, ngatitarisei pane ipfupi zvinoreva zvavanoita.
Kubudirira pamwero wongororo
Kubudirira mwero mutsetse wezvigadzirwa zvakagadzirwa neLe-Vel. Iyo THRIVE nhanho mubatanidzwa weTHRIVE Premium Lifestyle Capsules, THRIVE Ultra Micronized Lifestyle Shake Mix, uye Premium Lifestyle DFT (Derma Fusion Technology). Ivo vanozvirumbidza nezve premium naturopathic uye synergistic fomula yeVitamini, Zvicherwa, Dyara Zvaburitsa, Anti-Oxidants, Enzymes, Pro-Biotic, uye Amino Acids. Ivo vanopa ruzivo rwunoita nezvechikadzi zvakanangana nevarume & Vakadzi.
Kubudirira Premium Lifestyle capsules akagadzirirwa varume nevakadzi.
Premium Lifestyle capsules yakagadzirirwa kutorwa nekukurumidza paunomuka pane chisina chinhu mudumbu.
Kubudirira macapuleti ndeye ese-echisikigo naturopathic fomula yemavhitamini, zvicherwa, mishonga yemakwenzi, antioxidants, makemikari, maprobiotic uye amino acids uye ndiyo yekutanga uye chete Ultra-premium fomula yakambogadzirwa.
Anti-kuchembera uye antioxidant musanganiswa
Tsamira tsandanyama tsigiro
Kugaya uye kutsigira immune
THRIVE Premium Lifestyle DFT Kufambira mberi kwetekinoroji kwakanangana nehutano, hutano uye kurema manejimendi uye inofanirwa kuiswa nekukurumidza mushure mekunwa kweTrive Shake.
The Thrive level DFT patch formula increases metabolic rate, kukurudzira kuchena, hutano huremu manejimendi, Pasina kubatsira mukuparara kwemhasuru kana kuora senge zvigadzirwa zvakawanda zvekureruka zviripo.
THRIVE Premium DFT ndiyo icing pane keke. Using the DFT patch with THRIVE level Premium Lifestyle Capsule and THRIVE Premium Lifestyle Shake Mix completes the THRIVE level 8 chiitiko chevhiki. Iwe unowana ultra-premium, zvisingaenzaniswi mhedzisiro mukudya, kurema manejimendi uye kugwinya.
Lifestyle capsules uye inofanirwa kutorwa 20 ku 40 maminitsi mushure mekutora macapsule.
Fomura yakapfuma muzvicherwa zvemuviri
Iko kusanganiswa kweprobiotic nema enzymes
Iko kusanganiswa kwe antioxidants uye zvigadzirwa
Kurera huremu kana kugwinya
Pamusoro pe, vatengi vanotora macapsule uye vanonwa yakakosha Kubudirira zvinovaka muviri. Uye nekuti hutano (uye kuonda zvakanyanya) inosanganisira zvinopfuura zvaunoisa mumuviri wako, Kubudirira Chiitiko chinosanganisirawo zvakagadzirirwa masvondo masere ekugwinya zvirongwa.
Dzokera kuchigamba, capsules uye kuzunza, zvakananga, chii chaicho chaunoisa mumuviri wako kana iwe uchitanga ruzivo rweKubudirira?
Le vel inokura zvigadzirwa zvemubvunzo
Ukanyatso tarisa pamisanganiswa inoratidza kuti zvigadzirwa izvi zvinogadzirwa nemavhitamini, amino acids, makemikari, uye mapurobioti (zvese zvinodiwa nemuviri, asi kudya kwakawanda kunoshaya), pamwe nechigadzirwa chekudzikira uremu.
Yezvakasikwa Forslean mavambo uye huwandu hwakanaka hwekofi bhinzi uye girini tii MDFVFD
Izvo zvinenge zvese. Iwe haugone kuwana chero inoshamisa makemikari kana zvisingabvumirwe zvemutemo zvinodhaka zvakavanzwa mune Zvinobudirira zvigadzirwa. Izvo iwe zvauchazowana ndeupi ndiani ane zvinobatsira zvinovaka muviri. Uye kana zvabatanidzwa nechirongwa chataurwa pamusoro chemuviri, inokweretesa kumwe kutendeseka kuhuremu hwekurasikirwa uye hutano zvirevo zvakanamatira kune Rarama bhurandi.
Kubudirira hupenyu (Kwete kuti uvhiringidzike neTrive Market) ikambani yezvikafu iyo inotengesa griza-yakaomeswa-grocery kuburikidza nekutengesa kune tiered.
Pasina mubvunzo, mubvunzo unowanzobvunzwa nevanhu ndewekuti “une chero zvigadzirwa zve organic?” Uye mhinduro ndihungu. Zvimwe zvigadzirwa zvinogadzirwa zvakasikwa, but it’s a little more complicated than that.
I have done few researches on thrive life products and I have, as well, written a few articles on it. for this period of time, Ini ndave fan guru reTrive's single-ingredient zvigadzirwa nekuti hechino chinhu: ivo chaizvo chinhu chinogadzirwa. Huku inogona kunge iine huku. Strawberries ane sitirobheni. Kale.
Ivo vakagwamba nechando, dzakaomeswa uye dzakakandwa mubhokisi rine oxygen absorber. Hapana kudikanwa kwezvinochengetedza.
Ngatitorei muchidimbu zvigadzirwa zveTrive
Pane zvinhu zvakawanda zvinouya muhomwe dzehombodo kuti zvive nyore, asi pane zvinhu zvitatu zvinongouya chete mumasaga. Aya ndiwo mafirita ebheet, karoti nesipinashi. Kana iwe uchinetseka kuwana vana vako kuti vadye beet kana sipinashi, iyi ndiyo mhinduro yawanga uchitsvaga!
Beetroot fries inonaka kunge musanganiswa wemapichisi nemaapuro, uye ndizvo chaizvo zvakaita rwiyo: peach puree concentrate, applesauce concentrate, cranberry juice concentrate, juice concentrate beetroot, cranberry.
Upenyu Hwakanaka (at ThriveFreeze.com we sell Thrive Life Freeze Dried products) only sell pre-made products, just add water. These types of products have their place. You take them for emergencies sometimes when you can’t cook. Ivo zvakare vakanakira kuve panguva yemasikati iwe paunenge uine rakabatikana chirongwa. Zvakare, kana usati warongeka asi uye uchingoda kudya nekukurumidza.
Upenyu Hwakanaka, musika unobudirira, Honeyville, uye Augason Mapurazi ane zvigadzirwa zviripo semunhu zvigadzirwa mune zvakasiyana mabhokisi. Izvi zvinoreva kuti zviri nyore kushandisa uye kumhanya mune yako yekare yekare, zvakajairwa mabikirwo. Izvi zvinokutendera iwe kuti "udye zvaunochengeta uye chengetedza zvaunodya". Kubudirira hupenyu hunongopa mashoma "ingo wedzera mvura" chikafu, uye budiriro nhanho pamwe inopa zvakanyanya (asi zvakare vane yakawanda-imwechete yezvinhu zvekudya).
Kubudirira kunopa akawanda chete zvigadzirwa zvemagaba zvine zvachose zvisina zvidziviriro / zvinowedzera. Izvi zvinoreva kuti gaba regirini bhinzi rakadaro chete: 100% yakakanyiwa, chando kana kusatombobika bhinzi dzakasvibira. Musika unobudirira uye nhanho inobudirira zvakare zvine zvakawanda zvezvigadzirwa izvi, kunyange Achibudirira ane vazhinji vacho. Makambani ese ari matatu ane zvigadzirwa zvemabhokisi zvine zvinowedzera kana zvinodzivirira, kunyange kubudirira kune zvishoma. Ive neshuwa yekuverenga iwo mavara, kana izvi zvakakosha kwauri.
Hupenyu hunobudirira hunopa zvimwe zvishoma zvinoita kuti kushandisa chikafu chako kuve nyore:
Iyo yemwedzi yekubika show ine nyanzvi chef (Chef Todd), H
Iyo yekubheka saiti ine Chef Todd's mabikirwo pamwe nevazhinji varairidzi uye vatengi mari
Iyo Inobudirira Nhungamiro: bhuku rine matipi ekuti ungashandisa sei zvakawanda zvezvigadzirwa zvavo.
Handizive kana musika unobudirira uye nhanho inobudirira inopa urwu rudzi rwekutsigira kudzidza mashandisiro ekushandisa zvigadzirwa zvavo. Kana munhu achiziva kushandisa chigadzirwa, mutero uri nyore kwazvo uye marara acho mashoma.
Hazvina basa kuti unosarudza kupi kutenga chikafu chako, if you want to make the rotation easier, Thrive Life has some fantastic food rotation systems – some for your pantry and others that are stand-alone.
Most food storage comes in 10 tin cans (1 gallon cans), 5 ku 6 gallon pails, or in bulk (you have to pack it yourself). Sometimes wrapping the food yourself can be the cheapest option. This make these foods vary in quality.
Rarama upenyu zvinogadzirwa
Eating well is something more people are trying to do today. Just nekuti uchida kudya utano zvokudya hazvirevi une nguva yakawanda. Ungatobvumirana kutsvaga kuzodya pfungwa, iyo kuchasanganisira nokukurumidza Recipes kuti nguva dzose utano. It is easy to find dishes that you will want to make repeatedly.
Hazvina mhosva kuti ndedzipi mhando dzechikafu chaunoda kudya, iwe unogona kuwana mazano eupfu anoenderana nezvinodiwa zvako. Zvese zviripo, kubva pane zvekukurumidza chikafu kuti uwane chikafu patafura kune michero ine hutano, tudyo nezvimwe. Zvese zvaunoda kuti uite kusarudza kuti ndeapi aunoda kutanga watanga.
Iwe unogona kunyange kuwana yakakura yekudyira mazano kune yemuriwo. Kune zvakawanda zvakanaka zvakanaka zvekudya zvine hutano zvekusarudza kubva; kunyangwe vadikani venyama vanogona kusarudza kuyedza madhishi aya nguva nenguva. Kunyangwe zvirinani, semidziyo yakawanda inosanganisira nyama nemapuroteni, kudya kwechibage, ipapo chena chena mupunga mbatatisi chunks nezvimwe. kupa ipfupiso yezvinhu zvinogutsa zvinosanganisira.
Yakasanganiswa majiroji (strawberries, blueberries uye raspberries)
Chaizvoizvo, chero musanganiswa wezvibereko waunogona kusanganisa nyore wakanaka. Aya mabriji manyuko akanaka e fiber uye antioxidants. Kuti zvive nyore, unogona kunyange kutenga mabhegi mahombe emichero akaomeswa nechando wotora zvikamu zvinodiwa mangwanani uye vanofanira kunge vakagadzirira kudya masikati.
Makarotsi ndiwo manyuko akanaka efiber uye vhitamini A. Iko kupfeka pane yakajeka ranch zvirokwazvo haina hutano sekudya karoti, asi chidiki chete chinopa izvo zvekuwedzera kukurudzira kuti zvionekwe “zvinonaka” “. Ndiri kuenda kupurazi remwenje nekuti, mukufunga kwangu, purazi risina mafuta rine kuravira kunotyisa … ingozvichengeta nazvo 2 mashupuni kana zvishoma.
Green pepper yakanaka inotapira chikafu, kupa sosi yakanaka yefaera uye imwe yemuto wepurazi unowedzera munuhwi pasina zvakanyanya kukanganisa. Ingochengeta muto / muto kune 2 mashupuni kana zvishoma.
Iyo cucumber inogutsa chishuwo chakashata uye sosi yakanaka yevhitamini. Edza hummus ine imwe yekuwedzera zing, kunge dhiri hummus, kugutsa chishuwo chine munyu.
Yakatswanyika yai musanganiswa
Icho chikafu chakakwana chechisikigo. Mazai ehuku, izvo zvinowanzodyiwa nevanhu, dzakatakurwa nemapuroteni uye choline, izvo zvakakosha mukugadzirwa kwemaamino acids akakosha. Iine mavitamini akati wandei, akadai mavitamini A, B2, B6, B9 uye B12, uye zvicherwa zvakaita secalcium, phosphorus uye potasium. Yai yolk ine mavitamini A ese, D uye E. Kana mazai achidyiwa ari mbishi, zvinopa muviri simba uye simba.
Zviyo zvakaita semupunga, bhari, gorosi nechibage ndizvo zvinodyiwa zvekudya munyika zhinji. Dzinotorwa sezviyo uye zvirimwa zvakakosha munyika, ine hupfumi hwakawanda kwazvo hweprotein. Oats chibage chakazara mupuroteni. Kudya kweoat kunoshumirwa zvakanyanya panguva yekudya kwemangwanani sezvo vachipa simba rakaringana kwezuva racho.
Walnuts kazhinji ane hutano kana ari mbishi. Mazhinji nzungu ndiwo manyuko akanaka evitamini B2, E uye ine zvisaririra zvemaminerari senge magnesium, phosphorus, mhangura uye potasium. Nzungu mbishi dzinonyanya kupfuma mumapuroteni, folic acid uye faibha. Walnuts, kana isina kubikwa, vanoonekwa sevanoutano hwakanyanya, neakawandisa zvakapetwa antioxidant semamwe nzungu.
Zvibereko zvakakosha kwazvo kuvanhu nekuti ndimo munobva mvura uye neshinda dzakanaka. Iyo zvakare yakasikwa sosi vhitamini C. Zvibereko zvakawanda zvakare zvakapfuma mumapuroteni, kusanganisira mabhanana, maapuro, mavise, mangoes, mapichisi, oranges, cherries, jackfruit nemiorivhi. Kuti upfumise muviri wako neprotein, unogona kusanganisira michero iyi mukudya kwako. Kutsenga zvimwe zvezvibereko izvi zvekudya zvakare kunozopa iwe hutano hwakanaka hweprotein.
Mashizha emashizha anowanzo kuwanda mumapuroteni, yakaderera mumafuta uye yakaderera mune macalorie. Izvo zvinewo vitamini C, lutein, carotenoids, folic acid uye vhitamini K. Ivo vakapfuma mu calcium, iron uye fiber fiber. Mapuroteni epamusoro miriwo yemashizha inosanganisira sipinashi, broccoli, kare uye lettuce.
Cookies anobatsira kugutsa ichi chishuvo chemakabohydrate. Yese zviyo makuki zvine fiber uye antioxidants. Mukuwedzera kune zvakanakira mavitamini uye mapuroteni muzvigadzirwa zvemukaka, chizi inokuchengetedza iwe kugutsikana kwenguva yakareba uye inokutadzisa iwe kubva kudya kazhinji.
Edamame isosi yakanaka ye fiber uye mapuroteni. Iwe unofanirwa kuvawana pane yechando yechikafu chitsuwa che supamaketi. Thaw uye ubvise bhegi rakazara re sangweji uye uzvidye sechikafu. Kune zvishoma zvinonaka, wedzera pini yegungwa munyu uye zunza muhomwe.
Maamondi uye mazambiringa akaomeswa
Ndiyo musanganiswa wakakwana wezvinotapira uye zvinokachidza / munyu. Maamondi ane mafuta, asi mafuta ayo akanaka. Midziyo yakanaka sosi ye fiber. Edza kuwedzera kungori pini yemunyu wegungwa kuti uwedzere kunhuhwirira kushoma kumaamondi.
Eheka, chikafu ichi chine zvakawanda zvinokuvadza (mafuta, cholesterol, yavaibvisa), asi huwandu hwacho hwakadzikira uye mapuroteni anozokugutsa kwenguva yakareba kuti udzivise zvishuwo zvenguva yemberi. Chikafu chine hutano chakaenzaniswa nesaga reDoritos.
Fuji Apple zvidimbu
Maapuro ane sosi yakanaka ye fiber uye vhitamini C. Edza kuchengeta ganda remaapuro nekuti rine vhitamini C yakawanda. Peanut butter ine mapuroteni mazhinji anoichengeta kwenguva yakareba. Ingo chengeta kwete kupfuura 1-2 mashupuni.
erm: Kubudirira hupenyu lo
Kubudirira Musika ndeyeAmerican e-commerce nhengo-yakavakirwa mutengesi anopa zvisikwa uye zvakasikwa zvigadzirwa zvechikafu. Iyo yakavambwa naNick Green, Gunnar Lovelace, Kate Mulling, uye Sasha Siddhartha. Zvinoenderana newebhusaiti yavo,
Iyo inokudza zvakanyanya pa 5 zvese zvakasikwa, chirimwa-chakavakirwa, isiri-GMO, gluten-isina uye hutano hutano hunogonesa zvigadzirwa zvese zvakasiyana zvakamonerwa zvichivaita zvinotakurika uye zviri nyore kutora. Nezvose izvi, hapana chikonzero chekusanganisa, chiyero, kana kuseta zviyeuchidzo kuti uzvitore.
Kungomuka, tora 2 yemacapsule uye 20-40 maminetsi gare gare inwa iyo Lifestyle Sanganisa zunza uye isa iyo DFT.
Runako Rwakachena, Isiri-Inotyisa Kumba Organic Pantry Staples
Pazasi pane mashoma maficha akagadziriswa nemusika unobudirira
Rarama musika login
Kupinda mukati pane Kubudirira Musika app, zviri nyore kushandisa, inokurumidza uye nyore kushandisa. zviri nyore kuwedzera zvinhu kungoro kana uchinge waona dzichipera.
Nekuti musika unobudirira, iwe unobhadhara $60 yegore nhengo yemari, uye kusaina. Kunyangwe iwe uchikwanisa kuwana akawanda ezvigadzirwa zvakafanana kune vamwe vatengesi vepamhepo uye kuchitoro cheko. Asi chikamu chinonakidza chiri, kune yega yega inobhadharwa nhengo ivo vanopa yemahara nhengo kune yakaderera mari murwi, chikoro cheveruzhinji mudzidzisi, kana mhuri.
Heino imwe bhonasi: Kana ukashandisa zvinopfuura $ 49, kutumira kunogara kuri KWEMAHARA.
Kutaura nezve yavo yekushandisa interface uye yekubhadhara maitiro, zvese zviri nyore kwazvo kufamba, vanotakura chikafu chakawandisa uye zvinhu zvisingawori zvatinoshandisa nguva dzose, kurongedza uye kutumira kunoorora. Ivo vanoshandisa zvinhu zvakasimba uye vanoita basa rinoshamisa kurongedza girazi zvakaparadzana kubva kune zvimwe zvese uye mabhegi epurasitiki echinhu chero chinogona kubuda..